Labour - 英语 - 缅甸语 翻译和实例
您搜索了: labour (英语 - 缅甸语)
ငါတို့အမှုကိုကြိုးစား၍ ဆောင်ရွက်သော မာရိကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့။
ငါသည် အပြစ်သင့်ရောက်သည်ဖြစ်၍၊ အဘယ်ကြောင့် အချည်းနှီးကြိုးစားရမည်နည်း။
ငါသည်သင်တို့ဆီမှ အချည်းနှီး ကြိုးစားအားထုတ်သည်ဟု သင်တို့၏အကြောင်းကြောင့် စိုးရိမ် လျက်ရှိ၏။
လူသည်လည်း လုပ်ဆောင်ပြုမူခြင်းငှါ ညဦး တိုင်အောင် ထွက်သွားပါ၏။
ပျင်းရိသောသူသည် အလုပ်မလုပ်ချင်သော ကြောင့်၊ မိမိတပ်မက်သောအားဖြင့် သေတတ်၏။
လူကြိုးစားအားထုတ်သမျှတို့၌ ဝမ်းဘို့သာ ကြိုးစားအားထုတ်သော်လည်း၊ စားချင်သော စိတ်မပြေ နိုင်။
သူတို့၏ မြေအသီးအနှံကို ခါသိလကျိုင်းတို့အား၎င်း၊ သူတို့လုပ်၍ရသောဥစ္စာကို အရာဘကျိုင်းတို့အား ၎င်း ပေးတော်မူ၏။
လူသည်တယောက်တည်းထက် နှစ်ယောက် သာ၍ကောင်း၏။ ကြိုးစားအားထုတ်လျှင်၊ ကောင်းသော အကျိုးကို ရတတ်၏။
ကာယလုပ်သားများအတွက် COVID-19 ကူးစက်မှု၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသောဒေတာများ မရှိသေးပါ။
ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အလုပ်အကိုင်သည် အသက်နှင့်၎င်း၊ မတရားသောသူ၏ အကျိုးစီးပွါးသည် အပြစ်နှင့်၎င်း ယှဉ်၏။
သူ၌ရှိသမျှကို ကြွေးရှင်သိမ်းယူပါစေ။ သူလုပ် ၍ရသော ဥစ္စာကိုလည်း တပါးအမျိုးသား လုယူပါစေ။
ထိုသို့အလိုငှါ ငါသည် အမှုဆောင်ရွက်၍၊ ငါ၌ တန်ခိုးတော် ပြုပြင်အားထုတ်တော်မူသည်အတိုင်း ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏။
ထို့ကြောင့်ငါတို့သည် နေမြဲအရပ်၌ နေသည် ဖြစ်စေ၊ ကွာဝေးရာအရပ်၌နေသည်ဖြစ်စေ၊ သခင်ဘုရား နှစ်သက်တော်မူသော သူဖြစ်ခြင်းငှါ စေတနာစိတ်ရှိ၍ ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏။
कुछ पुरानी यादें (印地语>英语)i don't get drunk , i get awesome (英语>法语)oftalmica (意大利语>马耳他语)beskatningsspørgsmål (丹麦语>瑞典语)sto beneetu ? (意大利语>英语)波多野结衣9av免费在线观看 (日语>简体中文)pesonne ne s'ennuie (法语>英语)menduduki (马来语>简体中文)strenghtened my will (英语>他加禄语)subscript (英语>法语)flyer design (英语>克罗地亚语)naipit ng bato (他加禄语>英语)德国酸菜 (简体中文>英语)no soy perfecta pero soy unica (西班牙语>英语)cf (德语>意大利语)hinlilit sa kamay (他加禄语>英语)name (first name, last name) (英语>俄语)gesloten (荷兰语>西班牙语)fructus quibus (拉丁语>意大利语)acaso te molestaste amigo? (西班牙语>英语)mere account me paise aa gaye hain (印地语>英语)pampalubag loob (他加禄语>宿务语)chynadleddau (威尔士语>英语)what is label in relationship (英语>他加禄语)اسمانجوني (阿拉伯语>日语)